Usamirira. Nguva yacho haizombove yakaringana. - Napoleon Chikomo - Quotes Pedia
Usamirira. Nguva yacho haizombove yakaringana. - Chikomo cheNapoleon
Kumirira ndechimwe chezvikamu zvakajairika zvepfungwa dzevanhu. Sevanhu, vazhinji vedu vanofunga kumirira kusvikira mamiriro edu akanaka aitika. Uye nekuda kweizvozvo, isu tinogara tichida nguva yakakodzera yekuuya. Nekudaro, chinhu chakakosha icho iwe unofanirwa kunzwisisa izvo iyo nguva yakakodzera haina kumboitika.
Iko hakuna chakadai chinonzi nguva yakakodzera. Iwe unofanirwa kubvuma kuti chero chauri kuronga kuita, unofanirwa kuchiita izvozvi. Kana zvisadaro, ichanonoka. Saka, chinhu chakanakisa chaunogona kuita kwete kumirira.
Tinoziva kuti une zvimwe zvirongwa muhupenyu hwako. Uye iwe wakamirira nguva yakakodzera yekuita chirongwa chako. Asi, kana iwe uchida kuratidza kubudirira mukuzadzisa zvirongwa zvako, unofanirwa kutanga izvozvi.
Zvichida, zvinotora nguva yakati, asi mhedzisiro yacho ichava nezvibereko. Kunze kwezvo, kumirira hakuiti zvakanaka kwauri, kunze kwekunge kutambisa imwe yenguva yako yakakosha. Uye kana ukapedza nguva, haumbofi wakawana kubudirira kwahwo muhupenyu hwako.
Saka, inguva iyo iwe yaunofanira kutanga nekuzvipira kwakazara. Isu tinokuvimbisa iwe kuti iwe uchazadzisa chinangwa chako pasina nguva.
Usatambisa Nguva Yako Quotes
Ingoita It Quotes
Quotes Nezvenguva Uye Shanduko
Nguva Management Quotes
Kukosha KweNguva Quotes
Ichokwadi chaizvo kuti unogona kubudirira zvakanyanya uye nekukurumidza nekubatsira vamwe kuti vabudirire. - Chikomo cheNapoleon
Muhupenyu, unofanirwa kudzidza nezve kunzwira tsitsi uye kutsigira vamwe munguva dzekutambudzika. It…
Mukana kazhinji unouya wakahwanda muchimiro chenhamo, kana kukundwa kwenguva pfupi. - Chikomo cheNapoleon
Mukana kazhinji unouya wakahwanda muchimiro chenhamo zvinoreva kuti kana ukarasa mukana, iwe…
Nzvimbo yekutanga yekubudirira kwese chishuwo. - Chikomo cheNapoleon
Chido kunzwa kwakasimba kwekuda kuwana chimwe chinhu. Chido chinorevawo chishuwo chechimwe chinhu…
Mafungiro akanaka mafungiro akanaka. - Chikomo cheNapoleon
Mafungiro akanaka mafungiro akanaka. - Napoleon Hill Yakabatana Zvinyorwa:
Kana iwe usingakwanise kuita zvinhu zvikuru, ita zvidiki nenzira huru. - Chikomo cheNapoleon
Hazvina kubvira zvakafanira kuita zvinhu zvikuru kuti ubudirire. Vanhu vari kubudirira vakawana budiriro mu…